Ndị Paco laghachiri ọhụụ ọhụrụ | Bezzia
Nloghachi nke 'Los Hombres de Paco' nso na nso!
Susana godoy | 04/05/2021 14:00 | Akụkọ
'Ndị nwoke Paco' ha bụ otu n'ime usoro ndị ahụ ka na-agbanye isi anyị. Ọ bụ afọ 2005 mgbe mbụ anyị hụrụ ndị uwe ojii atọ nwere ndụ dị iche iche mana anyị bụ ndị enyi ọtụtụ afọ. Ihe omume ya, ezinụlọ ya na ịhụnanya ma ọ bụ obi mgbawa ga-eme ka anyị banye obere ihuenyo.
Yabụ afọ ise ka nke ahụ gasịrị, dị ka ihe ọ bụla ọzọ na ndụ, ọ na-abịa na njedebe. Ọgwụgwụ nke na-ahapụkarị anyị ịchọ karịa, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị odide agafeela usoro ahụ. Ugbu a ọ na-alọghachi na mmụọ ọhụrụ anyị ga-enwe ike ịhụ ngwa ngwa Poolu 3!
1 Nnukwu ihe ịga nke 'Los Hombres de Paco'
2 Ugboro ole na oge ole 'Los Hombres de Paco' nwere?
3 New soundtrack maka usoro Antena 3
4 Ebee ka anyị nwere ike ịhụ 'Los Hombres de Paco'?
Nnukwu ihe ịga nke 'Los Hombres de Paco'
Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ọ na - eme na usoro niile, ọ bụghị oge ọ bụla nke oge ya nwere otu ihe ịga nke ọma. N'ihi ya, mgbe ụfọdụ n'ime ihe odide ya hapụrụ ya, ikekwe mbelata nke ndị na-ekiri ya nwere ike bụrụ ihe ịtụnanya. Mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe 'ụmụ nwoke Paco' ruru telivishọn ha hụrụ etu ihe niile siri gbanwee. Ha nwere ihe niile anyị chọrọ ma ọ bụ ezigbo ọchị, oge mmetụta uche na mmekọrịta ịhụnanya, ha niile metụtara ụdị onye nchọpụta.. Ka oge na-aga, ndị ọhụụ ọhụrụ gbakwunyere atụmatụ ndị dị ugbu a ma bụrụ ndị kachasị mkpa, na akụkọ ọhụrụ nke ịhụnanya na ekworo. Ihe na-eme ka ọha na eze nwee mmasị ọzọ. Maka ihe a na ọtụtụ ndị ọzọ, usoro ahụ kwadoro ndị na-ege ntị nke ọma na ndị na-agba ya na-eti mkpu maka oge ọhụrụ.
Ugboro ole na oge ole 'Los Hombres de Paco' nwere?
Usoro a, rue ugbua, nwere ngụkọta nke oge 9 na ha niile tinye aka ruru naanị 117 mmemme. Ebe ọ bụ na ọ bụghị oge niile nwere otu oge. Fọdụ nwere obi ụtọ na anyị nwere 14 dịka ọ dị na oge nke abụọ, ebe nke kachasị bụ na ha nwere 12 ma ọ bụ 13. Ọ bụ n'etiti ọrịa na-efe efe na ụlọ mkpọrọ, Eprel 2020 mgbe a na-ekwu maka nloghachi enwere ike. A na-atụ anya ịse ihe nkiri ịmalite n'oge ọkọchị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Paco Tous na-ada ka otu n'ime ihe odide mbụ ịnọ na ya. Mana n’oge na-adịghị anya, e nyere aha ndị a kacha mara amara ka ha bụrụ otu ga-emeri anyị niile. N'ezie, n'oge ọkọchị nke 2020, Michelle Jenner na Hugo Silva ga-ekwenyekwa n'ọdịdị ha n'oge ọhụrụ.
New soundtrack maka usoro Antena 3
Anyị ekwuola na a ga-echekwa ihe nkedo a, yabụ anyị ga-ahụkwa ndị ọhụụ na ndị otu uwe ojii niile enweghị nkọwa, gụnyere kọmishọna. Mana ọ bụrụ na onwere otu ihe na-agbanwe, ọ bụ ya bụ ụda olu ya. Ugbu a ọ bụ oge Estopa, ndị na-ahụ maka inye ihe 'El Madero'. O bu egwu ohuru nke ga agba egwu n’oge ohuru ‘Los Hombres de Paco’. Ọ bụ ezie na ị na-echeta otu Pignoise, ugbu a ọ bụ Estopa ga-eweghara iji gbakwunye ụda nke usoro ihe ịga nke ọma.
Ebee ka anyị nwere ike ịhụ 'Los Hombres de Paco'?
O yiri ka a ga-ekewa isi iri na isii ọhụrụ ahụ na oge abụọ. Mana nke mbu, A na-atụ anya ịmalite na Antena 3, na oge oge oge wee gaa n'ihu ilele gị site na Atresplayer Premium. Nke a bụ ihe mere na usoro ụfọdụ na obere oge mgbe e mesịrị, anyị enweela ike ịhụ nke ọma. Maka ihe a na-atụ anya ga-eme otu ihe ahụ 'Los Hombres de Paco'. Ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere ụdị ikpo okwu ahụ kama ha chọrọ ịhụ otu ahụ ọzọ, na-alụ ọgụ maka ihe ọma ma na-echeta ịhụnanya ochie. You chọrọ ka ahapụ ya ugbu a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Nloghachi nke 'Los Hombres de Paco' nso na nso!
Wayszọ 5 iji hazie nchịkọta akwụkwọ gị